Météo samedi 11 juin 2016 - Agir avec Madagascar
Météo samedi 11 juin 2016
Hisy fiovana tampoka ny ‪toetry ny ‪‎andro ato ho ato ry zareo fa ‪‎MILA ‪‎MAILO sy ‪‎MITANDRINA, ary ‪‎MIFANENTANA isika, indrindra ny ‪‎FAHASALAMANA; mba hiarovana ny ain'ny rehetra no antony hilazanay mialoha: ny tsara fiomanana no tsy tapohin'ny loza, ;
Araka ny vina nataonay teto amin'ny ‪‎METEO ‪‎MALAGASY, Manomboka amin'ny ‪#‎ALATSINAINY ho avy izao, hatramin'ny ‪#‎ALAROBIA ‪‎15JONA, hiharatsy ny andro, indrindra any amin'ireto faritra ireto: ‪‎avaratra ‪‎atsinanan'ny Nosy, ny ‪‎Atsinanana manontolo, ny ‪‎afovoantany, hatrany amin'ny faritanin'ny ‪ Fianarantsoa. Hanorana mitsitapitapy mandritra ny tontolo andro, sady ‪‎hidina hatrany amin'ny 15°C ny ‪‎MARIPANA ‪#‎AMBONY ‪#‎INDRINDRA.
Hitanareo , fifanojoan-javatra 3 samihafa no mahatonga izay: eo aloha ny herin'ny ‪‎rivotra avy atsinanana, efa mahazatra amin'izao ririnina izao . Ankoatr'izay, misy ny rivotra ‪‎mangatsiaka sady mitondra hamandoana, miditra ao Analanjirofo ao, ary farany, ny fisian'ny antsointsika hoe "‪‎depression ‪‎dynamique" (alalinintsika tsikelikely ny momba izay amin'ny manaraka ) ao amin'ny lakan-dranon'ny MOZAMBIKA.
‪‎SAMIA #MAILO sy mandray andraikitra àry e: ataovy mafana tsara ny ‪‎zaza, ny ankizy mianatra. Tandrovy tsara ny fahasalamana ho an'ireo manana olana amin'ny taovam-pisefoana. Samia mandray andraikitra
Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho an'ny rehetra ny METEO MALAGASY,
« Projet ASKA à Farafangana... Rencontres du film court... »